Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण जाडोमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्ने खतरा
जाडोमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्ने खतरा
२७ मंसिर २०७७, शनिबार ०८:०३
काठमाडौँ, २७ मंसिर । विज्ञ चिकित्सकले गर्मीको तुलनामा जाडोमा कोरोना संक्रमणबाट हुने मृत्युदर बढ्ने खतरा औंल्याएका छन् ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक घटिरहेको देखिए पनि मृत्यु दर भने घट्न सकेको छैन । नेपालमा दैनिक औसत पाँच हजारजना संक्रमित थपिँदा मृत्यु हुनेको संख्या २२ देखि ३२ सम्म थियो । हाल दैनिक एक हजारदेखि १२ सयको दरले संक्रमित थपिएका छन्, मृत्यु हुनेको संख्या १५ देखि २० हाराहारी छ ।
कोरोना संक्रमण घटेकै बेला संक्रमितको मृत्यु घट्नुको सट्टा बढ्ने सम्भावना रहेको चिकित्सकले औंल्याएका छन्। शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान विभाग संयोजक डा. शेरबहादुर पुनको अनुभवमा वृद्धवृद्धा होम आइसोलेसनमा छन्, उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे समयमै जानकारी दिन नसकेर उपचारमा ढिलाइ हुँदा मृत्युदर बढेको छ। यो दर जाडोमा अझै बढ्ने स्थिति छ । ‘होम आइसोलेसनमा रहेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी आमाबुवाले मोबाइल चलाउँदैनन्’, पुनले भने । मोबाइल नचलाउँदा उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे परिवारका सदस्यलाई समयमै खबर दिन सकेका छैनन् । राजधानीमा मानिस व्यस्त रहने र केही हुँदैन भनेर बस्ने क्रममै उपचारका लागि ढिलो भइसक्ने डा. पुनले बताए ।
संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ र व्यवसायमा घाटा पर्छ भन्ने सोचले पनि परीक्षण नगराउनु, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुनु, जाडो महिनामा कोरोना भाइरस धेरै दिनसम्म जीवित रहनु, अन्य फ्लुको संक्रमण पनि बढ्नुजस्ता कारणले गर्मीको तुलनामा जाडोमा कोरोनाबाट बढी मृत्यु हुने सम्भावना रहेको चिकित्सकले औंल्याएका छन् ।
वीर अस्पतालका छातीरोग विशेषज्ञ डा. अशेष ढुंगानाका अनुसार पहिलो लहरको कोरोना संक्रमण सकिएर जाडोमा दोस्रो लहर आउने स्थिति रहेको र त्यसको असर गम्भीर हुन सक्ने सम्भावना छ । ‘नयाँ रोग भएकाले दोस्रो लहरको प्रभाव अहिलेको भन्दा कडा हुन सक्छ’, उनले भने। युरोप तथा अन्य पश्चिमी देशहरूमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण भइसकेको उनले बताए ।
डा। ढुंगानाका अनुसार जाडोमा संक्रमणको दर बढ्न सक्ने र यसले मृत्युदर पनि बढाउन सक्छ। बढ्दो प्रदूषणबाट उत्पन्न धुलोका कणहरू श्वास–प्रश्वास नलीमा अड्किने र दम तथा सिओपिडीका रोगीहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा मृत्युको जोखिम बढ्न सक्छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा पवित्रा सुनारले लेखेकी छिन् ।
राष्ट्र बैंकले १० अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकबोल गर्ने
काठमाडौँ, १८ फागुन । आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन तोलामा १७ सयले
काठमाडौँ, १८ फागुन । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान भएर सकारात्मक परिसूचक देखापर्दै गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ह्वात्तै
काठमाडौँ, १८ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ । Exchange Rate
सेयर बजारमा ४० अंकको सुधार
काठमाडौँ, १७ फागुन । आज सेयर बजारमा ४०.६४ अंकको सुधार देखिएको छ । योसँगै सेयर बजारले पुनः २५ सय अंक